८५ वर्षका श्रीमानले ८० वर्षीया श्रीमतीलार्इ दिए सेक्स टोय उपहार - Everest Dainik - News from Nepal
८५ वर्षका श्रीमानले ८० वर्षीया श्रीमतीलार्इ दिए सेक्स टोय उपहार
कस्ता हुन्छन् सेक्स टोय !
डा. राजन ताज्या
छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ
उमेर बढ्दै गएपछि यौन क्षमतामा पनि ह्रास आउँदै जान्छ । तर, एकजना ८५ वर्षका वृद्ध कण्डम हाउसमा आएपछि युवराज अचम्ममा परेका थिए ।
युवराज ती वृद्धको कथा सुनाउँछन्, ‘काठमाडौंबाटै वृद्धदम्पती मेरो पसलमा आउनुभयो । वृद्धको उमेर ८५ वर्ष र उनको श्रीमतीको उमेर ८० भन्दा कमको रहेछ । मसँग आएर ती वृद्धले भन्नुभयो, ‘हामीले पछिल्लो डेढ महिनासम्म सहज रूपमा यौनसम्पर्क गरिरहेका थियौँ ।
अचानक मेरो यौनांग उत्तेजित हुन छाड्यो । त्यसैले श्रीमतीका लागि सेक्स टोय लिन आएको ।’ उनीहरूले सेक्स टोय खरिद गरेर लगेको केही समयपछि वृद्धको त्यस्तो समस्या निको भएको कण्डम हाउसका युवराजले जानकारी दिए ।
तेस्रोलिंगी र समलिंगीले पनि सेक्स टोयको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्ता खालका थुप्रै ग्राहक युवराजको सम्पर्कमा छन् । समलिंगीको स्वभाव भएका, तर बुवाआमाको दबाबमा विपरीत लिंगीसँग बिहे गरेकाहरूले पनि सेक्स टोय प्रयोग गरेको पाइन्छ । युवराज भन्छन्, ‘यौनकर्मीहरू सेक्स टोय खरिद गर्न आउँदैनन् । तर, तेस्रोलिंगी र समलिंगी सेक्स टोय प्रयोग कर्ताको संख्या भने ठूलै छ ।’ कतिपयले बुब्सहरू पनि खरिद गर्ने गरेको युवराज बताउँछन् । कति हुन्छ खपत, कस्ता हुन्छन् सेक्स टोय
याे पनि पढ्नुस दश वर्षसम्म योनीमा सेक्स टोय अड्कियो !
एकपटक ह्विलचेयरमा बसेर एक अधबैँसे दम्पती कन्डम हाउस पुगे । उनीहरूले पसलेसँग आफ्नो समस्या बताए । केहीबेरपछि श्रीमान्ले भने, ‘मलाई स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको ५–६ वर्ष भइसक्यो । यदि रुचि भए अरूसँग सेक्स गर्दा हुन्छ भनेर पनि मैले पटक–पटक भनेँ । तर, उसले मानिनँ । बिहे गरभन्दा पनि मान्दिनँ । एउटा राम्रो खालको सेक्स टोय दिनुपर्यो ।’
यौनका बारेमा व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक बुझाइ हुन सक्छ, तर एउटा समान धारणा के हुन्छ भने सबै यसमा गोप्यता चाहन्छन् । यौन शरीरको यस्तो आवश्यकता र चाहना हो जसलाई मान्छेले सधैँ नियन्त्रणमा नराख्न पनि सक्छ । चाहेको वेला यौन चाहना पूर्ति नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा विकल्पका रूपमा सेक्य टोयहरू रोजाइमा पर्न थालेका छन् । नेपालमा पनि सेक्स टोयको माग बढ्दै छ ।
विश्वास खड्का थोकीको रिपोर्ट नयाँ पत्रिकाबाट